Mampiasa ny Apple Pencil ho toy ny refy sy synthesizer | Vaovao IPhone
Pablo Aparicio | | iPad Pro, Apple products
Ny iray amin'ireo lesoka indrindra hita amin'ny iPad Pro dia eo amin'ny efijery, satria tsy mora tohina amin'ny tsindry toa ny Apple Watch sy ny iPhone 6s / Plus. Maro aminareo no hieritreritra hoe "Inona no ho lany tamin'izy ireo raha nanampy efijery iray farafaharatsiny toa ny Apple Watch?", Izay heveriko fa manana valiny izay tsy tian'ny olona iray: raha te hilalao amin'ny tsindry ataon'ny iPad Pro ianao , mividy a Apple Pencil, stylus izay manohana ny fiovan'ny tsindry, ankoatry ny zavatra hafa, fa tsy amin'ny vidiny ambany.
Na ara-drariny na tsia (Tsia!) Ankoatr'izay, tadiavin'ny mpamorona Simon Gladman fitsapana amin'ny Apple Pencil amin'ny fomba isan-karazany, fa aza mieritreritra ny hanondrika azy na hametraka azy ao anaty rano. Araka ny hitanao amin'ireto horonan-tsary manaraka ireto, ny pensilihazo Cupertino dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana samihafa, ny sasany amin'izy ireo tsy misy dikany loatra satria fitaovana lafo vidy toy izany. Fa misy olon-kafa roa toa mahaliana.
Io no fampiasana izay tsy hitako loatra. Mandany € 109 ho mandrefy lanja Toa tsy dia mety amiko loatra ny fampiasana an'io fitaovana io. Toa mahavaly be ity fampiharana ity, saingy tsy dia marina loatra. Ho fanampin'izany, mila antsika manamboatra mpanohana sy sehatra iray afaka ahafahana manohana ireo zavatra ireo.
Amin'ity horonantsary faharoa ity isika dia afaka mahita kinova mandroso amin'ny fampiharana ny fanodinana sary avy amin'ilay mpamorona voalaza etsy ambony. Ity fampiharana ity dia mampiasa ny Apple Pencil ho -maso hametahana ireo masontsivana fanivanana.
Ary farany, manana PencilSynth isika, izay hahafahantsika mifehy ny fahita matetika, ny fanovana ary ny lafiny hafa amin'ny feo miankina amin'ny fironana sy ny toeran'ny Apple Pencil. Mampatsiahy ahy amin'ny fomba sasany amin'ny Theremin izy io, mazava ho azy ny fitahirizana ny halavirana. Ny tena tsy mazava amiko dia ny hahitantsika azy amin'ny ho avy mihoatra ny fampiharana mahaliana, na dia tsy mino aza aho fa manaiky an'io karazana fampiharana io ao amin'ny App Store i Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Izy ireo dia mampiasa ny Apple Pencil ho toy ny refy, synthesizer ary mpamorona sary 3D
Publino dia hoy izy:
Ny doka manao dokam-barotra apetrakao ao anaty horonantsary, tsara kokoa ny mahita azy ireo ao amin'ny YouTube.
Valio amin'i Publino
Mpampiasa iray no nilaza fa ny Apple Watch dia may noho ny hatony